“ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အပြင်ကိုပရိသတ်တွေမမြင်ရပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ လူမှုမီဒီယာကိုကြည့်တိုင်း Fenerbahce ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါတွေ့တယ်။ ငါဒီကိုရောက်တော့ Galatasaray နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းချက်ချင်းပဲငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ဒါရိုက်တာ၊ သမ္မတနှင့်ကစားသမားများကဒါဘီအကြောင်းပြောပြသည်။
Fenerbahçe – Galatasaray ဒါဘီသည်အလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည် Paris-Marseille ဒါဘီနှင့်တူသည်။ ဒါဟာအရမ်းကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါ။ တက္ကစီဒရိုင်ဘာက ‘မင်းလိုချင်တဲ့ပွဲဟာမင်းရှုံးပြီ၊ Fenerbahce ပရိတ်သတ်တွေကသူတို့ကဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရပ်ကွက်ထဲမှာမရပ်နိုင်ရင်တောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာအားပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
RESTBET501 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA138 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA100 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SULTANBET561 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! SULTANBET561 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN SULTANBET561 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! RESTBET501.COM ÖDEME YAPIYOR MU SULTANBET561 BEŞİKTAŞ JOSEF DE SOUZA’YI AÇIKLADI
8 Comments on SULTANBET561 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!”
TUĞBA November 29, 2020 at 1:50 am
NEVAL November 29, 2020 at 4:00 pm
HAYRUNNİSA November 30, 2020 at 9:10 am
SİBEL December 1, 2020 at 8:30 pm
HÜMEYRA December 4, 2020 at 1:20 pm
COŞKUN December 9, 2020 at 3:40 pm
ASLI December 10, 2020 at 5:30 pm
HİDAYET December 12, 2020 at 4:00 pm